m, Hunter hogan anyị, nwere na-eme ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na nke a website, HunterThinks.com. dị ka nke 5 April 2018, na website bụ na a mebere nkesa na a Linux arụ ọrụ usoro. The web-nkesa software bụ Apache. WordPress.org software dị iche iche plugins jikwaa kasị ọdịnaya.
Mgbe ị nweta HunterThinks.com, gị edinam nwere ike ịmepụta otu ma ọ bụ karịa log Ndenye software achịkwa HunterThinks.com, otu ma ọ bụ karịa kuki ozi site HunterThinks.com, na / ma ọ bụ agabiga data otu ma ọ bụ karịa-atọ ndị ọzọ ọrụ na-eji HunterThinks.com.
ụfọdụ na ndekọ, kuki, ma ọ bụ atọ ndị ọzọ ọrụ nwere ike ọmụma banyere gị. Ụfọdụ n'ime ihe ọmụma nwere ike na-echekwara site HunterThinks.com. N'ime ókè nke iwu nke ụmụ mmadụ na iwu nke physics, M nwere ike ime ihe ọ bụla na-na na na m chọrọ na ozi.
Ebe ọ bụ na m mere nke a website na 2001, m kasị edinam a na-eleghara, wee hichapụ, ozi. Ma, ị kwesịrị iche na m ga-abụ a dickhead ka Google, Equifax, Facebook, na US ọchịchị, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta ọ bụla ọchịchị ọzọ, ma jiri ozi ahụ na-abụ Ike: mgbe niile n'ime ókè nke iwu, n'ezie.
Ọ bụrụ na ị na-amasị m iwu, i nwere ọtụtụ nhọrọ. Gị mma oke bụ mgbe eji internet. A pro-na-elekọta mmadụ na-ahọrọ ga-abụ inyere m ike ma mejuputa a mma iwu nzuzo. Ma, ị ga-eme na, n'ihi na ọ ka ụtọ ka Anụọhịa banyere ụwa karịa ka mma ụwa. A atọ nhọrọ bụ n'ihi na ị na-echebe gị onwe gị na nzuzo.
-Atọ ndị ọzọ nzuzo atumatu
HunterThinks.com eji-atọ ndị ọzọ ọrụ na ụfọdụ ọrụ ndị pụrụ ịgụnye ndị na-esonụ ọrụ. Ọ bụrụ na-eji ndị a-atọ ndị ọzọ ọrụ, mgbe ndị ọrụ nwere ike nzuzo atumatu, ma ha nwere ike na-adịghị agbasosi ha atumatu na fọrọ nke nta niile nke ndị a na-atọ ndị ọzọ nwere a akụkọ ihe mere eme nke na-eme ka ịrịba mgbanwe ha atumatu.
Google AdSense nzuzo-iwu chọrọ
HunterThinks.com ojiji Google AdSense na-ekesa mgbasa ozi. N'ihi HunterThinks.com eji Google AdSense, Google na-achọ HunterThinks.com na-agwa gị ndị na-esonụ:
Ọzọ mgbere, tinyere Google, Google AdWords-atọ ndị ọzọ mgbere, na DoubleClick Ad Exchange mgbere iji kuki iji na-eje ozi na mgbasa ozi dabeere na gị na mbụ na-eleta HunterThinks.com.
Google ojiji nke DoubleClick kuki enyere ya na mmekọ na-eje ozi na mgbasa ozi iji gị dabeere na gị nleta HunterThinks.com na / ma ọ bụ ndị ọzọ na saịtị na Internet.
Ị nwere ike ịpụ na DoubleClick kuki maka mmasị dabeere na mgbasa ozi site na ịga na DoubleClick si Mgbasa ozi Settings.
Ị nwekwara ike pụọ na a na-atọ ndị ọzọ na-ere iji kuki maka mmasị dabeere na mgbasa ozi site na ịga na-ere si website-anatara na Google AdWords-atọ ndị ọzọ mgbere na DoubleClick Ad Exchange mgbere-ma site na ịga aboutads.info.
HunterThinks.com anaghị enwe ohere ndị kuki ma ọ bụ ihe ọmụma ndị dị na kuki. Ke mma, HunterThinks.com nwere ike na-ele ụfọdụ nchịkọta ihe ọmụma banyere ihe niile kuki kere Google na metụtara HunterThinks.com.
Nzuzo atumatu nke ndị ọzọ Google ngwaahịa
HunterThinks.com eji Google Analytics, Google ahaziri Search, Google+, na ikekwe ndị ọzọ Google ngwaahịa. Ke mma, HunterThinks.com nwere ohere nchịkọta ozi anakọtara site na Google. Iji ghọta Google si atumatu, biko hụ Olee Google eji data mgbe ị na-eji anyị mmekọ’ saịtị ma ọ bụ ngwa ọdịnala . (pụtara: mgbe ị na-na HunterThinks.com na Google nakọtara data banyere gị, ihe Google na-aga ime na anakọtara data.)
Nzuzo atumatu nke ndị ọzọ-atọ ndị ọzọ kuki
Ọdịnaya site na otu nke atọ nwere ike ihe metụtara kuki ma ọ bụ ndị ọzọ na usoro nke nsuso (a nbanye, ọmụmaatụ) achịkwa ndị ọzọ. A page on HunterThinks.com na a YouTube video, ọmụmaatụ, yiri ka o nwere otu ma ọ bụ karịa kuki achịkwa YouTube na pụrụ ọbụna ga-metụtara gị YouTube na akaụntụ. HunterThinks.com anaghị enwe ohere ọ bụla nke kuki ndị a, ozi ke kuki, ma ọ bụ gị atọ ọzọ na ozi akaụntụ: gwụla ma anyị na-eme nwere ohere, ma dị ka nke 5 April 2018, M na-amaghị atụmatụ nke ọ bụla, ma e wezụga. Mgbe ụfọdụ, HunterThinks.com nwere ohere nchịkọta ọmụma si ọzọ.
Ụfọdụ ndị ọzọ na-atọ ndị ọzọ nke nwere ike na-anakọta ozi banyere gị mgbe ị na-eji HunterThinks.com, na nsonye, n'usoro abiidii:
Automattic, nwe WordPress.com, onye nke Jetpack plugin maka WordPress
Categories Enyemaka Tags AdSense, AdWords, Facebook, Google, Nzuzo, WordPress post igodo